Muran Hadheeyay Doorashadda Uganda Iyo Natiijadda Hirdhaca Ah | Araweelo News Network
Muran Hadheeyay Doorashadda Uganda Iyo Natiijadda Hirdhaca Ah
Kampala(ANN)Muran ayaa hadheeyay natiijooyin hordhac ah oo ka soo baxay doorashooyinka madaxtinimada ee dalka Uganda kadib markii natiijooyinkaasi muujiyeen in Madaxweynaha xilka haya, Yuweri Museveni hoggaaminayo, waxaana lagu daaadiyay wadooyinka ciidamo.
Gudida doorashada ee Uganda ayaa hore u sheegay inay ku dhawaaqayaan natiijada ugu dambaysa ee doorashooyinka Madaxweynaha iyo kuwa Baarlamaankaa maalinta Sabtida.
Balse muran ka bilaabmay Cod bixintii dhacday Khamiistii, ayaa sababay banaan baxyo rabshado watay oo ka dhacay qaybo ka mid ah Caasimadda ka dib markii xabsiga loo taxaabay hogaamiyaha mucaaradka Kizza Besigye, kaas oo lasii daayay Habeennimadii Jimcaha.
Wararka qaar ayaa sheegaa in la tiriyay ilaa rubac ka mid ah codadkii la dhiibtay 60%,haysto Mr Museveni, oo xiligan 71 jir ah, isla markaana xukunkana soo hayay muddo 30 sano ah, wuxuuna aad uga horreeyaa ninka ugu soo dhow tartanka ee Kizza Besigye. Sida ay sheegayaan natiijooyinka hordhaca ah.
Dib u dhacyo ku yimi goobaha codbixinta qaarkood maalintii shalay ayaa keentay in maanta codbixintu sii socoto. Siyaasiyiinta mucaaradku waxay dib u dhacyada ku tilmaameen kuwa ula kac loo sameeyay oo loo jeeday in Museveni looga faa’iideeyo.
Qaar ka mid ah musharraxiinta mucaaradka ayaa sheegaya in doorashadu aanay ahayn mid xor ah. Laakin xukuumadda Ugnda , ayaa beenisay dhaleecayntaa.
Madaxweyne Yoweri Museveni waxaa la loollamaya 7 musharrax, wuxuuna rajaynayaa inuu ku guulaysto doorashaa, iyadoo durba Natiijooyinka hordhac ah oo ka soo baxaya guddiga doorashadu muujinayaan in Madaxweyne Museveni uu haysto in wax yar ka badan 60% codadkii la dhiibtay.
Ninka ugu weyn mucaardka ka hor jeeda, Kizza Besigye, oo ku xiga, ayaa haysta 30% natiijadii ilaa hadda lagu dhawaaqay.
Hase yeeshee mucaraadka ayaa sheegaya in arrinta uu muranku ka taagan yahay tahay in agabkii codbixinta meelaha qaar dib uga dhaceen, taas oo lagu dhaliilay.
Madaxweyne Museveni, wuxuu canbaarayn kala kulmay xadhiga ninka la loolamaya iyo qaabka xukuumaddiisu u maamushay arrimaha doorashooyinka.